बढार्न आएका कलाकार फोटोसुटमै मग्न – Sourya Online
बढार्न आएका कलाकार फोटोसुटमै मग्न
सौर्य अनलाइन २०६८ चैत ३० गते २:२७ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २९ चैत : दिउँसोको १ बजेको थियो । नायिका नन्दिता केसी हतारहतार रत्नपार्कस्थित शान्तिबाटिका छिरिन् र कुचो उठाइन् । सफा अनि चिटिक्क परेका स्विटर, टिसर्ट र ट्राउजरमा सजिएकी उनी कुचो बोकेर मर्किन थालिन् । पत्रकारका क्यामेरा क्लिक-क्लिक हुन थाले । कुचो बोकेेर विभिन्न पोज दिइरहिन् । अलिअलि बढारेजस्तो पनि गरिन् तर क्यामेरातिरै हेरेर । उनको कुचोले शान्तिबाटिकामा जम्मा भएका कागज अनि प्लास्टिकलाई छोए/छोएनन् भन्न गाह्रो थियो ।
नायिका विनीता बरालचाहिँ उनीभन्दा पहिल्यै शान्तिबाटिका छिरिसकेकी रहिछन् । कुचो उनका हातमा पनि थियो तर ध्यान क्यामेरातिरै देखिन्थ्यो । क्यामेराअगाडि पर्दा अलि बान्की मिलाएर बढारेजस्तो गर्थिन् । यिनले चाहिँ कागजका दुई-चार टुक्रा जम्मा गर्न भ्याइन् कि ! समग्रमा लाग्थ्यो- उनीहरू कुचो बोेकेर फोटोसेसनका लागि पोज दिइरहेका छन् ।
बुधबार शान्तिबाटिकामा उनीहरूसहित अरू पनि थुप्रै कलाकारको जमघट थियो । उनीहरू आएका थिए- शान्तिबाटिका सफा गर्दै सरसफाइसम्बन्धी चेतना बाँड्ने भनेर ।
कार्यक्रम कुनै संघसंस्थाले आयोजना गरेको नभई कलाकार स्वतःस्फूर्त रूपमै आएका थिए । तर, अधिकांशको ध्यान फोटोसुटतिरै देखियो । ‘प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरसफाइको सन्देश प्रवाह गर्न आह्वान गरेकाले हामी कलाकारसहित उपस्थित भएका हौँ,’ नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले यसो भन्दा निर्माता-निर्देशक अशोक शर्मा सुनाउँदै थिए- ‘जबसम्म फोहोर नर्क हो भन्ने भावना विकास हुँदैन, तबसम्म सरसफाइको व्यवस्थापन सम्भव छैन ।’ कलाकारले दिने सन्देशले जनमानसमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले नेताहरूले सरसफाइ सम्बन्धमा सुरु गरेको अभियानमा आफूहरूले हातेमालो गरेको विनीताले बताइन् ।
कार्यक्रममा झरना थापा, मौसमी मल्ल, निशा अधिकारी निशा सुनुवार, आयुष रिजाल, राजवल्लभ कोइराला, नवल खड्का, दिनेश डिसी, जितु नेपाल सबैले कुचो त समाए तर ध्यान लाएर बढारेनन् । शान्तिबाटिका सफा गर्ने निर्देशकहरू उदय सुब्बा र श्याम भट्टराई, द्वन्द्वनिर्देशक राजेन्द्र खड्गी, संगीतकार चेतन सापकोटा, सुनील थापालगायत कलाकर्मी उपस्थित थिए । तर, उनीहरू फर्किसक्दा पनि उद्यानभित्रका कागज अनि प्लास्टिक त्यत्तिकै देखिन्थे ।